Merkel oo diiday casuumaad Trump uga timid. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Merkel oo diiday casuumaad Trump uga timid.
Merkel oo diiday casuumaad Trump uga timid.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale baajiyay kulanka sanadlaha ah ee madaxda wadamada la isku G-7 oo ah 7-da wadanka ee aduunka ugu dhaqaalaha xoogan. Wuxuuna go´aanka baajinta kulankan ay isugu imaan lahaayeen madaxda 7-daas wadan uu yimid, kadib markii ay hogaamiyaha dalka Germany ay diiday casuumaad uga timid madaxweynaha mareykanka.
Angela Merkel ayaa si maamuusan u diiday casuumaada uga timid Trump, iyada oo ku sababeysay xaalada xanuunka Corona-virus oo xanibay isku socodka diyaaradaha aduunka.
Reysulwasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa sidoo kale diiday inuu aqbalo casuumaada Madaxweyne Trump, isaga oo ku sababeeyay xaalada caafimaad ee dalkiisa ka jirto.
Trump ayaa hada ku qasbanaan doono inuu mar kale dib u dhigo kulankan, isaga oo qorsheeyay inuu kulankaas dhici doonto bisha September ee sanadkan.
Xigasho/kilde: Trump utsetter G7-møte etter nei fra Merkel og Trudeau
Previous articleBergen: Soomaali lagu qabtay daroogo herion ah.
Next article(Video): Caritas ressurssenter: Xarunta caawinta ajaaniibta ee shaqada, sharciyada iyo arrimaha caafimaadka. Kala xiriir: 23334361